အိုမင်း ရင့်ရော်မှုကို တားဆီးပေးနိုင်ပြီး အရွယ်တင် နုပျိုစေတဲ့ အသီးတို့ရဲ့ဘုရင် ဒူးရင်းသီး – media sport
Homeကျန်းမာရေးအိုမင်း ရင့်ရော်မှုကို တားဆီးပေးနိုင်ပြီး အရွယ်တင် နုပျိုစေတဲ့ အသီးတို့ရဲ့ဘုရင် ဒူးရင်းသီး
[Zawgyi]အိုမင်း ရင့်ရော်မှုကို တားဆီးပေးနိုင်ပြီး အရွယ်တင် နုပျိုစေတဲ့ အသီးတို့ရဲ့ဘုရင် ဒူးရင်းသီး
ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အထူးသင့်တော်ပေမယ့် တချို့သောသူတွေကတော့ သူ့အနံ့ကြောင့် အနားတောင်မကပ်ပဲ ရှောင်ဖယ်သွားတတ်ကြပါတယ်။ အနံ့ကြောင့် ပြင်းပြင်းထန်ထန်ငြင်းပယ်ကြပေမယ့် တကယ်တမ်းလေ့လာကြည့်တဲ့အခါ ရလာမယ့်အာဟာရတန်ဖိုးက အလွန်များပြားပါတယ်။ အသက်ရွယ်ကြီးရင့်မှုကို ဟန့်တားပေးနိုင်ပြီး မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ သွေးနီဥတွေကိုလည်း တိုးပွားစေတဲ့အရာပါ။
ဒီတစ်ပတ်ဝေမျှပေးချင်တာကတော့ အပြင်ကိုဆူးတွေနဲ့ကာရံထားပြီး ပုံမှန်အသီးတွေထက်အနံ့ပိုပြင်းတဲ့ ဒူရင်းသီးပါ။ အသီးတွေရဲ့ဘုရင်လို့တောင်တင်စားကြပြီး အပူပိုင်းဒေသတွေမှာပေါက်ရောက်လေ့ရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေမှာ အတွေ့ရအများဆုံး အသီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံသားတွေကတော့ ဒူရင်းသီးဆို အသီးလိုအပြင် မုန့်နဲ့သရေစာတွေမှာပါ ထည့်သွင်းအသုံးပြုတဲ့အထိ စွဲလမ်းနှစ်ခြိုက်စွာ စားသုံးလေ့ရှိကြပါတယ်။ သူ့ရဲ့ပြင်းရှတဲ့အနံ့ကြောင့် အများပြည်သူသုံးယာဉ်ပေါ်၊ စားသောက်ဆိုင်၊ ဟိုတယ်တွေထဲ သယ်ဆောင်ခွင့်ပိတ်ပင်ထားပါတယ်။
ဒူးရင်းသီမှာ ဗီတာမင်၊ ပရိုတင်း၊ ရေဓာတ်နဲ့ phytonutrients ပါဝင်တာကြောင့် ကိုယ်ခံအားစနစ်ကောင်းစေပြီး အစာကြေလွယ်ပါတယ်။ ဒီ့ပြင် အရိုးအဆစ်သန်မာစေသလို ညဘက်အိပ်မပျော်ရောဂါနဲ့ ကင်ဆာရောဂါတွေကိုပါ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒူးရင်းသီးမှာပါတဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းစေတဲ့ အာဟာရတန်ဖိုးအများကြီးထဲကမှ အဓိကအချက်သုံးချက်ကို ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်။ ပထမဆုံးအချက်ကတော့ အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို တားဆီးပေးတာပါ။ antioxidants ပါတာကြောင့် အသက်အရွယ်ကြီးရင့်စေတဲ့ free radicals တွေကို လျော့ချပေးပါတယ်။ မျက်နှာပေါ်က အရေးအကြောင်း၊ အစက်အပြောက်နဲ့ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းကိုပါ သက်သာစေတဲ့အသီးပါ။ ဒီ့ပြင် သွားကျိုးခြင်းနဲ့ အဆစ်ရောင်ရောဂါတွေကိုပါ ကာကွယ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
ဒုတိယအချက်က မျက်ရည်အိတ်ဖြစ်ခြင်းကို သက်သာစေတာပါ။ ဒူးရင်းမှာ tryptophan လို့ခေါ်တဲ့ သဘာဝဓာတုပစ္စည်းတစ်မျိုးဟာ စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေကို လျော့ကျစေပြီး ဦးနှောက်အနားယူနိုင်အောင် ဖန်တီးပေးပါတယ်။ မျက်ရည်အိတ်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အဓိကတရားခံက ညဘက်အိပ်မပျော်ရောဂါကြောင့်ပါ။ ဒါကြောင့် ဒူးရင်းသီးစားပေးမယ်ဆိုရင် စိတ်အေးချမ်းပြီး ကောင်းမွန်စွာအိပ်စက်အနားယူနိုင်မှာပါ။ ဒူးရင်းသီးမစားတဲ့သူဆိုရင်လည်း အနှစ်ကိုယူပြီး မျက်လုံးအောက်မှာလိမ်းထားမယ်ဆိုရင်လည်း သက်သာစေပါတယ်။
နောက်ဆုံးအချက်ကတော့ ဒူးရင်းမှာ ဖောလစ်အက်စစ် အများအပြားပါဝင်တဲ့အချက်ပါ။ ဖောလစ်အက်စက်က ခန္ဓာကိုယ်မှာလိုအပ်တဲ့ သွေးနီဥတွေကိုတိုးပွားစေတာကြောင့် သွေးအားနည်းရောဂါဖြစ်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုမြှင့်တင်ပေးတဲ့ ဗီတာမင်စီလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီလိုအာဟာရဓာတ်တန်ဖိုးတွေ အများအပြားပါဝင်တဲ့ အသီးတို့ရဲ့ဘုရင် ဒူးရင်းသီးကို အနံ့ခံနိုင်တယ်ဆိုရင် ပုံမှန်စားသုံးပေးကြဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
[Unicode]အိုမငျး ရငျ့ရျောမှုကို တားဆီးပေးနိုငျပွီး အရှယျတငျ နုပြိုစတေဲ့ အသီးတို့ရဲ့ဘုရငျ ဒူးရငျးသီး
ခန်ဓာကိုယျအတှကျ အထူးသငျ့တျောပမေယျ့ တခြို့သောသူတှကေတော့ သူ့အနံ့ကွောငျ့ အနားတောငျမကပျပဲ ရှောငျဖယျသှားတတျကွပါတယျ။ အနံ့ကွောငျ့ ပွငျးပွငျးထနျထနျငွငျးပယျကွပမေယျ့ တကယျတမျးလလေ့ာကွညျ့တဲ့အခါ ရလာမယျ့အာဟာရတနျဖိုးက အလှနျမြားပွားပါတယျ။ အသကျရှယျကွီးရငျ့မှုကို ဟနျ့တားပေးနိုငျပွီး မရှိမဖွဈလိုအပျတဲ့ သှေးနီဥတှကေိုလညျး တိုးပှားစတေဲ့အရာပါ။
ဒီတဈပတျဝမြှေပေးခငျြတာကတော့ အပွငျကိုဆူးတှနေဲ့ကာရံထားပွီး ပုံမှနျအသီးတှထေကျအနံ့ပိုပွငျးတဲ့ ဒူရငျးသီးပါ။ အသီးတှရေဲ့ဘုရငျလို့တောငျတငျစားကွပွီး အပူပိုငျးဒသေတှမှောပေါကျရောကျလရှေိ့ပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ အရှတေ့ောငျအာရှနိုငျငံတှမှော အတှရေ့အမြားဆုံး အသီးလညျးဖွဈပါတယျ။ အရှတေ့ောငျအာရှနိုငျငံသားတှကေတော့ ဒူရငျးသီးဆို အသီးလိုအပွငျ မုနျ့နဲ့သရစောတှမှောပါ ထညျ့သှငျးအသုံးပွုတဲ့အထိ စှဲလမျးနှဈခွိုကျစှာ စားသုံးလရှေိ့ကွပါတယျ။ သူ့ရဲ့ပွငျးရှတဲ့အနံ့ကွောငျ့ အမြားပွညျသူသုံးယာဉျပျေါ၊ စားသောကျဆိုငျ၊ ဟိုတယျတှထေဲ သယျဆောငျခှငျ့ပိတျပငျထားပါတယျ။
ဒူးရငျးသီမှာ ဗီတာမငျ၊ ပရိုတငျး၊ ရဓောတျနဲ့ phytonutrients ပါဝငျတာကွောငျ့ ကိုယျခံအားစနဈကောငျးစပွေီး အစာကွလှေယျပါတယျ။ ဒီ့ပွငျ အရိုးအဆဈသနျမာစသေလို ညဘကျအိပျမပြျောရောဂါနဲ့ ကငျဆာရောဂါတှကေိုပါ ကာကှယျပေးနိုငျပါတယျ။
ဒူးရငျးသီးမှာပါတဲ့ ကနျြးမာရေးအတှကျကောငျးစတေဲ့ အာဟာရတနျဖိုးအမြားကွီးထဲကမှ အဓိကအခကျြသုံးခကျြကို ဝမြှေပေးခငျြပါတယျ။ ပထမဆုံးအခကျြကတော့ အိုမငျးရငျ့ရျောမှုကို တားဆီးပေးတာပါ။ antioxidants ပါတာကွောငျ့ အသကျအရှယျကွီးရငျ့စတေဲ့ free radicals တှကေို လြော့ခပြေးပါတယျ။ မကျြနှာပျေါက အရေးအကွောငျး၊ အစကျအပွောကျနဲ့ ဆံပငျကြှတျခွငျးကိုပါ သကျသာစတေဲ့အသီးပါ။ ဒီ့ပွငျ သှားကြိုးခွငျးနဲ့ အဆဈရောငျရောဂါတှကေိုပါ ကာကှယျပေးနိုငျစှမျးရှိပါတယျ။
ဒုတိယအခကျြက မကျြရညျအိတျဖွဈခွငျးကို သကျသာစတောပါ။ ဒူးရငျးမှာ tryptophan လို့ချေါတဲ့ သဘာဝဓာတုပစ်စညျးတဈမြိုးဟာ စိတျပငျပနျးမှုတှကေို လြော့ကစြပွေီး ဦးနှောကျအနားယူနိုငျအောငျ ဖနျတီးပေးပါတယျ။ မကျြရညျအိတျဖွဈခွငျးရဲ့အဓိကတရားခံက ညဘကျအိပျမပြျောရောဂါကွောငျ့ပါ။ ဒါကွောငျ့ ဒူးရငျးသီးစားပေးမယျဆိုရငျ စိတျအေးခမျြးပွီး ကောငျးမှနျစှာအိပျစကျအနားယူနိုငျမှာပါ။ ဒူးရငျးသီးမစားတဲ့သူဆိုရငျလညျး အနှဈကိုယူပွီး မကျြလုံးအောကျမှာလိမျးထားမယျဆိုရငျလညျး သကျသာစပေါတယျ။
နောကျဆုံးအခကျြကတော့ ဒူးရငျးမှာ ဖောလဈအကျစဈ အမြားအပွားပါဝငျတဲ့အခကျြပါ။ ဖောလဈအကျစကျက ခန်ဓာကိုယျမှာလိုအပျတဲ့ သှေးနီဥတှကေိုတိုးပှားစတောကွောငျ့ သှေးအားနညျးရောဂါဖွဈခွငျးကို ကာကှယျပေးပါတယျ။ ကိုယျခံအားစနဈကိုမွှငျ့တငျပေးတဲ့ ဗီတာမငျစီလညျး ပါဝငျပါတယျ။ ဒီလိုအာဟာရဓာတျတနျဖိုးတှေ အမြားအပွားပါဝငျတဲ့ အသီးတို့ရဲ့ဘုရငျ ဒူးရငျးသီးကို အနံ့ခံနိုငျတယျဆိုရငျ ပုံမှနျစားသုံးပေးကွဖို့ တိုကျတှနျးခငျြပါတယျ။
ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ထိုင်းသတင်းမီဒီယာတွေမှာ နာမည်ကြီးနေသော အချစ်စိတ်ကြွဆေး ဖါတန်းပင်အကြောင်း ဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်
iphone x casesHttp://Www.Cazacomics.Com/ fkwxgs 78621
Cheap Jerseys china http://www.Ueenter.net/ sbdxjl46314
iPhone CasesWeb1009.Ns6.titd.net ymidwd 354
sex toysSex Toys swtjig 55787
Cheap Jerseys china Cheap Nfl Jerseys rdbkhr2669
wigsCheap wigs human hair wknaeb 52655
cheap vibratorshttp://www.midwestsportsfans.com/2011/04/down-on-the-farm-victory-field-bowling-Green-ballpark-abraham-lincolns-birthplace-and-lexington-legend-Bryce-harper/ aoenkl 15324
iPhone Cases saleIphone Cases Sale hkdpgn 76121
cheap wigsAbigail elmaoh 76445
Cheap Jerseys free shipping Cheap Jerseys China gktfmt79348
who had been conductingalittle homework on this. And he actually bought me lunch because
dildosDildos rmaqen 9600
remaining phase 🙂 I care for such infoalot. I used to be